downloads 3 784
n'ihi na FSX version pịa ebe a. The Atlas Cheetah bụ a fighter ugbo elu nke South African Air Force. Obu isi nweta nkwalite nke Dassault Mirage III. Atọ dị iche iche variants e kere, sọrọ oche-Cheetah D, na otu-n'oche Cheetah E na Cheetah C. The Cheetah si e lara ezumike nká na dochie Saab JEMS-39 Gripens
Nke a ngwugwu e dere dị nnọọ ọhụrụ visual nlereanya na airfile e redone iji melite ụgbọ elu Ọnọdụ nke ugbo elu. Ọ na-agụnye otu nlereanya na oke nke multiple ngwá agha configurations, omenala ụda, na panel na ugbo elu kpọmkwem gauges, na mfe na-agụ clickable virtual kokpiiti. Ọ na-atụmatụ a na-arụ ọrụ Rada, igwefoto simulated gauges, a ọhụrụ MFD, ọhụrụ nav ngwá, ikpuru paseeji na nsonaazụ ụda. Ọ gụnyekwara a nkịtị na mbara ihuenyo panel. Biko gụọ akwụkwọ (PDF)
Onye edemede: Thinus Pretorius